“Harry Kane ayaa haatan ka fiican Cristiano Ronaldo” – Halyeey hore oo hadlay – Gool FM
“Harry Kane ayaa haatan ka fiican Cristiano Ronaldo” – Halyeey hore oo hadlay
(London) 14 Feb 2018 Halyeeygii hore ee xulka ingiriiska iyo Southampton ee Matt Le Tissier ayaa amaanay laaciba ay isku dalka yihiin ee Harry Kane.
Matt Le Tissier ayaa sheegay in waqtigaan marka la fiiriyo Harry Kane uu ka fiicanyahay xiddiga adduunka ee Cristiano Ronaldo oo bilooyin ka hor ku guulaystay Ballon d’Or.
Harry Kane ayaa qaab ciyaareed fiican ku jira halka Cristiano Ronaldo laga dareemayo hoos u dhac aan horay loogu arag xiliciyaareed kaan.
“Waqtigaan waxaan u arkaa in Harry Kane uu ka fiicanyahay Cristiano Ronaldo” ayuu Matt Le Tissier u sheegay Sky Sports.
“Ronaldo qaab ciyaareed fiican ayuu soo bandhigay sanadihii la soo dhaafay, waqti aan yarayn ayuu haystay adduunka, haddii labadooda isbarbardhig lagu sameeyo dabcan Ronaldo ayaa dooranayaa, laakiin Harry Kane xaqiiqdii heer kale ayuu ku jiraa xiliciyaareed kaan”.
“Laakiin waxaan doonayaa inaan Kane siiyo talo muhiim ah taas oo ah inuu joojiyo istuurka uu isku tuurayo xerada ganaaxa sabab la’aan waayo wuxuu leeyahay awood uu ku dhamaystiri karo weerarka halkii uu raadin lahaa gool ku laad”.